कसरी आँखाको सौन्दर्य बृद्धि गर्न: उपयोगी सुझावहरू
तपाईं विश्राम हेर्न भने, तपाईंको आँखा चमक छन्। यो तुरुन्तै चारैतिर नोटिस। यो पनि फरक हुन सक्छ कसरी विशाल विश्वास गर्न गाह्रो छ। हरेक केटी किन आँखा उज्जवल देखा बनाउन चाहन्छ कि छ। यसलाई पूर्ण स्वस्थ चमक देखिन्छ र तपाईंले विश्वस्त महसुस गराउँछ। तिमी धेरै थकित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले लापरवाहीसंग एक गुच्छा, तपाईं सौन्दर्य हेरचाह र लेग्गीन्स धारण छैन। तपाईं महान भन्ने महसुस भने, के तपाईं संसारको जित्न चाहन्छौं। तपाईं तुरुन्त आफैलाई धेरै बढी समय दिनेछु। त्यसैले तपाईं कसरी बाहिर आँखा छनोट गर्छन्? यी सुझावहरू प्रयोग!
उज्यालो छाया प्रयोग
आँखा उज्यालो प्रकाश थप गर्न सजिलो तरिका को एक आँखा छाया को प्रयोग हो। एक नाजुक sheen संग उज्यालो छाया छान्नुहोस् - र आफ्नो नजर रेखांकित सिद्ध हुनेछ। पूर्ण तपाईं अनुरूप हुनेछ कि एक फेला पार्न विभिन्न रङ प्रयास गर्नुहोस्। को टियर ducts गर्न सकेसम्म नजिक को रूप मा, शताब्दीको भित्री तेस्रो मा छाया फैलाउने, आफ्नो आँखा को एक सानो कुना लागू हुन्छ। त्यसैले तपाईं ताजा र हँसिलो देखिन्छ। यो विधि प्रयास गर्नुहोस्, परिणाम तपाईंलाई आश्चर्य हुनेछ: अतिरिक्त प्रयास बिना, तपाईं धेरै आकर्षक हुनेछ।
को ओठ ध्यान छैन
तपाईं एक नाजुक, तटस्थ छाया लिपस्टिक चयन गर्दा, सबै ध्यान आफ्नो आँखा छ। यो आफ्नो अनुहार बनाउन थप expressive हुन्छ, माथि अरूको विचार जुटाउने मद्दत गर्छ। को नजर accentuate गर्न लाइटर लिपस्टिक प्रयोग गर्नुहोस्। यो दैनिक प्रयोगको लागि पूर्ण अनुकूल छ जो एक धेरै नै सरल तरिका छ।
एक चिसो नुहाउनु प्रयास
तपाईं कठिनाई बिहान उठ्दै छन् भने, बरफ पानी तपाईं पूर्णतया मदत गर्नेछ। जब हामी पछाडि सुत्न, तरल पदार्थ आँखा वरिपरि संवेदनशील छाला अन्तर्गत accumulates। यो गाढा अन्तर्गत-आँखा बैग को उपस्थिति गर्न जान्छ। सबै भन्दा राम्रो तरिका उनलाई उन्मुक्ति पाउनु - बरफ। तेज परेलिहरु एक व्यक्ति थकित बनाउन। ठंडक विचित्रताहरू काम गर्दछ! तपाईं पनि चिसो पानी संग डुब्नु भर्न र अनुहार ड्रप गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं मात्र आँखा अन्तर्गत बैग को प्राप्त छुटकारा हुनेछ, तर पनि कफी बिना हँसिलो महसुस गर्न। दुई पटक लाभ उठाउन! यो प्रविधी प्रयास गर्न निश्चित हुनुहोस्!
ज्योति कंसीलर फेला
प्रकाश कंसीलर थकान को संकेत को तुरुन्त छुटकारा प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। यो एक प्रभावशाली परिणाम दिन्छ कि एक धेरै नै सरल कदम हो। मुख्य कुरा हो - सही उपकरण चयन गर्न! कंसीलर बी बी-क्रीम, चिन्तनशील कणहरु यसलाई कम स्पष्ट गाढा सर्कल बनाउन एक उत्कृष्ट तरिका हो। मानिसहरू लागि, यो विधि काम छैन, तर तिनीहरूले छाला मा सिद्ध छ कि एक छाया संग एक सनस्क्रीन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो पत्ता लगाउन तपाईं मिल्दो के फरक विकल्प प्रयास गर्न महत्त्वपूर्ण छ। चमक दृश्य बनाउन प्राकृतिक विधि द्वारा सकेसम्म धेरै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सबै concealers उत्तिकै, राम्रो विशेष गरी नाजुक र संवेदनशील छाला को लागि हो, त्यसैले सबै भन्दा राम्रो पाउन केही फरक तरिका प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईं पक्कै पनि माथि गर्न बिहान धेरै समय खर्च गर्न रुचि छैन। यस मामला मा, यो हरेक उत्पादन सकेसम्म कुशलतापूर्वक काम महत्त्वपूर्ण छ। पक्कै पनि परेलाहरु घुमाई लागि चिमटी छ overkill जस्तो, तर तिनीहरूले प्रयास गर्नुपर्छ! लम्बाइ र परेलाहरु को मात्रा Emphasizing, तपाईंले आफ्नो आँखा व्यापक खुला बनाउन। सधैं दोब्र्याइएको lashes र त्यसपछि काजल केही कोट प्रयोग गर्नुहोस्। केही मानिसहरू मा, सीधा lashes को प्रकृति, दृष्टि रोकन थप जीवन्त देखिन्छ। चिमटी तुरुन्तै समाधान गर्न यो! यो केवल केहि सेकेन्ड हुनेछ, र परिणाम एक लामो समय को लागि दृश्यात्मक हुनेछ।
झूटा परेलाहरु प्रयास
झूटा परेलाहरु - आँखा जोड अर्को तरिका हो। तिनीहरूले आँखा ठूलो र expressive बनाउन। यस मामला मा, राम्रो lashes एकदम प्राकृतिक हेर्न हुनेछ। यो प्रयास गर्नुहोस्, र पनि फरक नोटिस। एक सानो अभ्याससँगै - र तपाईं सजिलै यस्तो परेलाहरु, यसरी तपाईं पक्कै पाउनेछन् भनेर प्रयोग गर्नेछ।
को परेलिहरु सेतो जोड
प्रकाश छाया आँखा जोड, तर eyeliner भूल छैन। तपाईं लगातार मात्र कालो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो अवस्था परिवर्तन गर्न समय छ! सेतो eyeliner प्रयोग, यो आफ्नो आँखा उज्जवल गर्नेछ। विशेष गरी तल्लो पटल योग प्रभावकारी। तपाईं पर्याप्त निद्रा प्राप्त छैन, यदि तर राम्रो हेर्न चाहनुहुन्छ यो ठूलो तरिका हो। सेतो eyeliner राता लुकाउँछ र आफ्नो आँखा स्वस्थ र ताजा बनाउँछ। यो दैनिक प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सौन्दर्य बृद्धि गर्न एक नाजुक तरिका हो।
तपाईंको eyebrows बारे मा भूल छैन
भारी unkempt eyebrows थकित हेर्नुहुन्छ। अनुहार गर्न eyebrows हेरविचार ताजा देखिन्थे। एक उच्चारण मोड्नु संग मनोरम groomed eyebrows पूर्ण आँखा क्षेत्र रोशन मदत। Eyebrows बाहिर आँखा बनाउन र तिनीहरूलाई बडा बनाउन। ब्रो हाइलाइटर जोड, यो तुरुन्तै अनुहार चमक र ताजगी दिन्छ। सीधा ब्रो अन्तर्गत चम्कने एउटा सानो रकम - र तपाईंले पहिले नै परिणाम देख्न सक्छौं।
के तपाईं सबै प्रयास गरेका छन् भन्ने महसुस, तर आफ्नो आँखा अझै सायद, थकित हुन थाल्छ भने, कारण वृद्ध छ। शिकन कंसीलर लुकाउन सक्छ, त्यसैले यो एक विशेषज्ञ परामर्श गर्न समय। को eyebrows बीच बोटक्स वा Dysport एउटा सानो रकम तपाईंको अनुहार ताजा र खुला हेर्न बनाउन सक्छ। एक योग्य सम्पर्क गर्न र एक इंजेक्शन धेरै ठूलो प्रयोग नगर्नुहोस् निश्चित हुनुहोस्। यस मामला मा, आफ्नो उपस्थिति लाभ हुनेछ।
को Lids उचाल्न
तपाईं सर्जरी लागि तयार छैनन् भने, तपाईंले एक सताब्दी को लागि एक विशेष टास्ने टेप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले अदृश्य छ, तर प्रभाव हडताली र प्रभावशाली छ। टास्ने टेप को मद्दत तपाईंलाई थप खुला आँखा प्राप्त। यसलाई कोरिया र चीन मा यति लोकप्रिय अर्थ किन हो।
उमेर आकार ध्यान
तपाईं आफ्नो परेलिहरु भारी रचनाहरू भन्ने महसुस भने, शायद, यो सजिलै हल छ समस्या छ। Ptosis उमेर वा कारण लगातार पहनने संपर्क लेंस देखिन्छ। एक सर्जन संग सल्लाह लिनुहोस्। सायद यो आफ्नो पछिल्लो शताब्दीयौंदेखि लोच र चिटिक्क आकार फिर्ता हुनेछ जुन पर्याप्त सरल सञ्चालन, हुनेछ।
भिटामिन सी को सेवन जाँच
ड्राई छाडा छाला सधैं थकित देखिन्छ। छाला गर्न भिटामिन सी प्रयोग उज्ज्वल र निष्खोट थियो। यो pigmentation र रंग को हानि संग सम्झौता गर्न मद्दत गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी प्रविधी को छ। भिटामिन सी संग खाद्य पदार्थ खान र उपयुक्त क्रीम लागू हुन्छ।
थप पानी पिउन
छाला जवान बनाउन सबै भन्दा राम्रो र सजिलो बाटो - पानी प्रशस्त पिउने। निर्जलीकरण wrinkled छाला नजर बनाउँछ। साधनहरुलाई केही पनि ड्राई हेरचाह गर्न। उदाहरणका लागि, concealers एक सानो सुक्खामा सक्नुहुन्छ, त्यसैले moisturize हुनेछ कि एक खोज्न महत्त्वपूर्ण छ।
पर्याप्त निद्रा प्राप्त
तपाईं पर्याप्त सुत्न भने, आफ्नो मन धेरै fresher महसुस हुनेछ। खाट केही तकियों थप्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो शिर तरल तपाईं fresher हेर्नेछौं बिहान जम्मा छैन छाला मुनि, सपना हुर्के छ भने, साथै, राम्रो महसुस हुनेछ। ओछ्यानमा जानुअघि कोलैजेन को प्रक्रिया सक्रिय जो, retinol संग हालतमा लागू गर्न सकिन्छ। यो जसबाट झुर्रियाँ न्यूनीकरण, छाला मोटा र स्वस्थ बनाउँछ।
को सनस्क्रीन भूल छैन
प्रयोग सनस्क्रीन आफ्नो आँखा उज्जवल तुरुन्तै गर्न, तर समय यो तपाईंलाई मदत गर्नेछ। सूर्य गर्न एक्सपोजर छाला धेरै हानिकारक छ, त्यसैले राम्रो तर, घाम र एक शानदार टोपी प्राप्त गर्न निश्चित हुन। अतिरिक्त सूर्यका कक्षहरू मा डीएनए जलाएर आँखा पहेलो प्रोटीन गर्छ। अधिक तपाईं आफैलाई हेरचाह, अधिक expressive आफ्नो अनुहार छ!
कसरी नेत्रहीन नाक कम गर्न
Givenchy - Eau डे, जादुई परिवर्तन सक्षम
Sensai - उत्कृष्ट महिलाहरु को लागि कस्मेटिक्स
सबै भन्दा राम्रो मास्को बैंक मा सबै भन्दा राम्रो योगदान
रेस्टुरेन्ट "मधुशाला" (सेन्ट पीटर्सबर्ग): समीक्षा र फोटो
प्लास्टर दुखाइ र प्रवाहमा रहेको हात: के गर्न वा बनाउनुहुन्छ?
Onegin र Lensky: तुलनात्मक विशेषता तस्बिरहरू
गर्भावस्था बेला placenta को hyperplasia
TGP प्रकार्य। कार्य र राज्य र कानून को सिद्धान्त को समस्या
ट्यांक को के उपकरण मा T49 विश्व राख्नु भएको छ।
नर्वे मा परम्परा र संस्कृति